Applying Myanmar CDMA EVDO Internet | My Burmese Blog
Applying Myanmar CDMA EVDO Internet	On March 14, 2011	by Htoo Tay Zar	With	11 Comments	- Myanmar news	လွန်​ခဲ့​တဲ့ အပတ်​က ၅ သိန်း​တန် CDMA ဖုန်း​အတွက် EVDO သွား​လျောက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ၅ သိန်း​တန် ဒေါ်လာ ၅​၀​၀ တန် ဖုန်း​က မြန်မာ​ပြည်​မှာ လက်​ရှိ ၃ မျိုးရှိ​ပါ​တယ်။ CDMA 800 MHz ခေါ် ရန်ကုန်​ဖုန်း ရှိ​တယ်၊ CDMA 450 MHz ခေါ် နေပြည်တော်​ဖုန်း​ရှိ​တယ်၊ နောက် ၅ သိန်း​တန် GSM ဆို​တာ​လဲ ရှိ​သေး​တယ်။ အဲ​ဒီ​ထဲ​က​မှ 800 MHz အတွက် လျောက်​တာ​ပါ။ နောက်​လူ​များ အင်​တာ​နက် လျောက်​မယ်​ဆို လွယ်​အောင် steps တွေ အခု​တင်​ထား​လိုက်​ပါ​တယ်။ ပထမ​ဆုံး သက်ဆိုင်​ရာ​ဖုန်း​လျောက်​တုန်း​က မြို့​နယ်​ရဲ့ ဆက်​သွယ်​ရေး​ရုံး​ကို သွား​ရ​ပါ​တယ်။ သူ​က လေး၊ ငါး​မြို့​နယ်​ကို ဆက်​သွယ်​ရေး​ရုံး​တစ်​ခု သတ်​မှတ်​ပေး​ထား​တာ​ပါ။ အဲ​ဒီ​မှာ ဖုန်း​လျောက်​တုန်း​က စာချုပ်​မူရင်း၊ နောက် ဓာတ်​ပုံ ၂ ပုံ​လို​ပါ​တယ်။ ဖောင်​ဖိုး​တစ်​ထောင်​နဲ့ ဘာ​မှန်း​မ​သိ​တဲ့​ဖိုး ၅​၀​၀ ပေါင်း ၁​၅​၀​၀ လောက်​ပေး​ပြီး ဖောင်​ဖြည့်​ပါ ။ နောက် CDMA SIM card ကို ထုတ်​ကြည့်​ပြီး အဲ​ဒီ​က code number တွေ ဖောင်​မှာ ဖြည့်​ပါ ပြီး​ရင် အဲ​ဒီ​က ရုံး​ပိုင်​လား​တော့ မ​သိ စာ​တွေ​စစ်​ပြီး ​ေ​ငွ​သွင်း​ဖို့ ပန်းဆိုး​တန်း​သွား​ခိုင်း​ပါ​လိမ့်​မယ်။
​ေ​ငွ​သွင်း​ဖို့​က ပန်းဆိုး​တန်း အောက်​ဘ​လောက်​မှာ ရှိ​တဲ့ ဘဏ် ၂ ကို သွား​ရ​ပါ​မယ်။ ဘဏ် ၁ နဲ့ ကပ်​ရပ်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​မှာ ပိုက်ဆံ​သွင်း နောက် ချ​လံ ယူ​ပြီး​ရင်း အစော​ပိုင်း​က ဖောင်​ဝယ်​ခဲ့​ရ​တဲ့ သက်ဆိုင်​ရာ ဆ​သရ ရုံး​ကို ပြန်သွား​ပါ​လေ။ အဲ​ဒီ​မှာ ဘာ​မှန်း​မ​သိ​တာ​တွေ လုပ်​ပေး​ပါ​လိမ့်​မယ်။ နာမည်ခေါ်​ရင် ရ​လာ​တဲ့ စာ​ရွက်​နဲ့ အလုံ​ကို သွား​ရ​ပါ​မယ်။
ဆ​သရ ကရ​လာ​တဲ့ စာ​ရွက်​တွေ​နဲ့ အလုံ exchange ရုံး​မှာ ဖောင်​ဖြည့်​ပြီး လက်​ရှိ ရ​ပြီး​သား CDMA SIM card ကို ပလပ်​စ​တစ်​အိပ်​လေး​ထဲ​ထည့် ဖောင်​နဲ့​တွဲ​ပြီး တင်​ထား​ပါ။ နောက် ၁ နာ​ရီကျော်​လောက် အဲ​ဒီ​မှာ ထိုင်​စောင့် ပြီး​နာမည် ခေါ်​တဲ့ အခါ SIM Card အသစ်​ကို ယူ​လို့​ရ​ပါ​ပြီ။ အခု​ရေးထား​တာ စာ​အနေ​နဲ့ တို​ပေ​မယ့် တကယ်​တမ်း​လုပ်​ရင် နေပူ​ကြီး​ထဲ​မှာ လူ​တန်း​စီ​ရ စောင့်​ရ​နဲ့ တစ်​နေ​ကုန်​ပါ​တယ်။ SIM card ရ​ပြီး နောက်​နေ့​မှာ ဖုန်း​ပြန်ပြော​လို့ ရ​ပါ​မယ်.. နောက် ထပ် ၄​၈ နာရီ​လောက်​ကြာ​ရင်​တော့ EVDO Internet ရ​ပါ​ပြီ။ ပြော​ရ​ရင် ခေတ်​မှီ​ဖွံ့ဖြိုး​တိုးတက်​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် လူ့​စွမ်းအား​တွေ​ကို ဒီ​လို ဘာ​မဟုတ်​တဲ့ ကိစ္စ​နဲ့ တစ်​နေ​ကုန်​ရ​တာ နှမြော​ဖို့ ကောင်း​ပါ​တယ်။ စင်​ကာ​ပူ​တုန်း​က ဖုန်း 3G ပါ​အပါအဝင်​လျောက်​တုန်း​က အကို​လျောက်​ပေး​တာ ၁​၅ မိ​နစ်​အတွင်း SingTel မှာ ရ​လိုက်​ပါ​တယ်.. ဘန်​ကောက်​မှာ​တုန်း​က​လဲ ကို​မျိုးကျော်​ထွန်း EDGE Internet လုပ်​ပေး​တာ texi စီး​ရင်း​လုပ်​ပေး​သွား​တာ ကားပေါ်​က​နေ အောက်​မ​ဆင်း​ခင်​ရ​ပါ​တယ်။ ကွ​ျန်တော်​တို့​ဆီ​မှာ​တော့ တစ်​နေ​ကုန်​တယ်.. နောက် ပိုက်ဆံ​ယူ​ပုံ​က​လဲ data usage နဲ့ မဟုတ်​ပဲ မိ​နစ်​နဲ့ ဖြတ်​ယူ​ပါ​တယ်။ ဒါ​မျိုး​က အင်​တာ​နက် ကျ​ချင်​ကျနေ​မယ် ပိုက်ဆံ​တော့​တွက်​နေ​မယ့် သဘော​ပဲ။ လွန်​ခဲ့​တဲ့ ၂ ရက်​က MRTV က သ​တင်း​မှာ ကြေငြာ​တာ​တစ်​ခု​တွေ့​ရ​တယ် လွှတ်တော်​အမတ် တစ်​ယောက်​က မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ ဖုန်း​တွေ စျေး​အရမ်း​ကြီး​နေ​ပြီး ဖုန်း​အမျိုး​အစား​တွေ​လဲ များ​နေ​ကြောင်း​နဲ့ သူ​များ​နိုင်ငံ​တွေ​လို လူ​တိုင်း​သုံး​နိုင်​တဲ့ စျေး​ဖြစ်​အောင် လုပ်​ပေး​ဖို့ လွှတ်တော်​မှာ အဆို​တင်​တာ​တွေ့​တယ်။ သက်ဆိုင်​ရာ ဆက်​သွယ်​ရေး​ဝန်ကြီး​က မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ ဖုန်း​ဘယ်လောက်​ချ​ပေး​ထား​ပြီး လူ​ဘယ်​နှ​ယောက်​သုံး​တယ်​ဆို​တာ​တွေ ပြော​ပြီး လူ​တိုင်း ဖုန်း​ကိုင်​နိုင်​ဖို့ တစ်​ဆင့်​ခြင်း​လုပ်​နေ​တဲ့ အကြောင်း​ရှင်း​ပြ​သွား​တယ်။ ကွ​ျန်တော်​တို့​ဖုန်း​လိုင်း​ေ​ငွ​သွင်း​ရ​တာ ဒေါ်လာ ၅​၀⁠၀ ကျော်​သွင်း​ယူ​ရ​တာ​ပါ ဒါ​တောင် သူ​များ​နိုင်ငံ​တွေ​လို​မဟုတ်​ပဲ အိမ်ထောင်​စု​စာရင်း​တွေ​ကော မိတ္တူ​တွေ​ကော​အစုံ​ပဲ ပါ​ရ​သေး​တယ်။ သူ​များ​နိုင်ငံ​တွေ​ထက် စျေး​အရမ်း​ကြီး​ပါ​တယ်။ အခု​ချိန်​က ဒီ​မို​က​ရေ​စီ ကူးပြောင်း​မယ်​လို့ တရားဝင်​ကြေငြာ​ထား​တဲ့ အချိန်​ပါ။ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်း​တစ်​ရပ်​ဟာ ပြည်​သူ​ကို အလုပ်​အကွ​ျေး​ပြု​ဖို့ က အရေး​အကြီး​ဆုံး အချက်​ပါ ပြည်​သူ​တွေ​ကို လွယ်​အောင် ကိုယ်တိုင် လုပ်​မ​ပေး​နိုင်​ရင် လုပ်​ပေး​နိုင်​မယ့် အခြား ပုဂ္ဂလိက​ကို လွှဲ​ပေးလိုက်​ပါ လို့ အကြံ​ပြု​ချင်​ပါ​တယ်။ ဒီ​စာ​ကို​ဖတ်​နေ​မယ့် သူ​ထဲ​မှာ ဘ​လော့ဂ်​တွေ​စောင့်​ကြည့်​ဖို့ တာဝန်​ယူထား​ရ​တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်​တွေ​လဲ​ပါ​မှာ​ပါ စဉ်းစား​ကြည့်ပါ မိတ်ဆွေ​တို့ မိသား​စု​ဝင်​တွေ​လဲ ဖုန်း​အလကား​ရ​နေ​တာ​မဟုတ်​ပါ​ဘူး ကိုယ်​က ပိုင်​တယ်​ဆို​ပြီး အလွယ်​ရ​လိုက်​ပေ​မယ့် မိတ်ဆွေ​တို့ သားသမီး​တွေ မျိုး​ဆက်​တွေ​ကြ​ရင် မိတ်ဆွေ​တို့​လို့ VIP ဖြစ်​ချင်​မှ ဖြစ်​တော့​မယ် အဲ​ဒီ​အခါ​ရောက်​ရင် သူ​တို့ မ​ပင်ပန်း​ပဲ လုပ်​လို့ ရ​နိုင်​မယ့် စနစ်​တွေ​ကို ကိုယ်​ချင်း​စာ​စိတ်​တွေ​နဲ့ ပြောင်းလဲ​ဖို့ လို​နေ​ပြီ​ဆို​တာ စဉ်းစား​သင့်​ပါ​ကြောင်း ဒီ​နေရာ​က​နေ ပြော​လို​ပါ​တယ်။
Share this:FacebookTwitterGooglePinterestPocketEmail	Burma, Myanmar, Myanmar news, Personal	11 Comments	nyanmin
မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် တောရော မြို့ပါ မကျန် တယ်လီဖုန်းအလုံးရေများ အလျဉ်းသင့်သလို တိုးမြှင့် ချထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တွင်လဲ ပြည်သူလူထုများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့အောင် ဤဝန်ကြီး ဌာန အနေနဲ့ တဆင့်ချင်း အဆင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အတွက် လူကြီးမင်း တေဇာရဲ့ တောင်းဆိုမှုအား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ 😛
Hi Ko Htoo,
Can you clarify for some question I have?
After you changed the sim card for internet, can you directly connect from your laptop to CDMA and connect to Internet? Is it depend on the Handset or is there any third party hardware need to involve? Thanks Nyi.
@ Bro Thet ~ Hello Bro, yes bro it is depend on handset. In Myanmar, most of CDMA 800MHz handset cannot use EVDO directly in phone and can’t even use as modem to connect laptop. Till now I only know that Huawei C8500, C8600 and one Samsung phone can only use Internet in phone directly. That3phones can use as internet modem to use with laptop too. Huawei C8500, C8600 are Android OS based and running version 2.1. Can upgrade it up to 2.2.1. But I don’t know about Samsung handset. Let me know if there’s some more question. I would like to help. Thanks
ညီေလး ခုေနာက္ပိုင္းမွ CDMA 800 ၀ယ္တဲ့သူေတြက EVDO တစ္ခါတည္း ပါျပီးသားလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ထက္ျပီးကတ္လဲရေသးလား။ ေနာက္ျပီး Laptop နဲ႔ EVDO အသံုးျပဳပံုေလးေတြ ေရးႏိုင္ရင္ေရးပါအံုး။
Thanks Nyi. If the model is not supported. is there any third party hardware we can easily buy in Yangon? Please advise.
@MDP ~ Hello Bro, I’m not sure they did already activated EVDO with CDMA SIM. I didn’t heard that too most likely they will still doing the same way as usual to get more money from customers. Ok bro I will test and write about how to use with laptop soon bro Thanks.
@ Bro Thet ~ Yes bro, there’re some CDMA EVDO modem which is available in Yangon computer markets. Price will be around 30000K and really look like usb thumb drive.
Thanks again Nyi. This really help my question 🙂
I am planning to buyadecent better phone to use with my CDMA phone. Is it possible to use it on HTC PRO which isaCDMA 800 based device ? I am curious when I use the CDMA on my Huawei I see the 3g signal. HTC TOUCH PRO EVDO .
@ Taihei Miyagi ~ Bro, I just checked now that HTC PRO is just GSM phone so that means it will not work with CDMA EVDO internet. 3G itself doesn’t mean it’s GSM network bro. 3G is also available on both GSM and CDMA too. As far as I know, Huawei is C8500, C8600 is the suitable phones for the CDMA EVDO bro. Thanks